African Heroes: Bellydancer, Popstar, Mufashoni Dhizaina, Yekuratidzira Kurota Chikwata, uye Anoshambira
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » African Tourism Bhodhi » African Heroes: Bellydancer, Popstar, Mufashoni Dhizaina, Yekuratidzira Kurota Chikwata, uye Anoshambira
African Tourism Bhodhi • Nhau Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • tsika nemagariro • Egypt Kudzokorora Nhau • Ethiopia Kupwanya Nhau • Fashoni Nhau • Hurumende Nhau • Investments • Jorodhani Kuputsa Nhau • Libya Kupwanya Nhau • nhau • chengetedzo • South Africa Breaking News • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Tunisia Kupwanya Nhau • Akasiyana Nhau
rakanyorwa George Taylor
African Tourism Board yanga iri pamberi kumberi apo dambudziko riri kubuda iri kuitika.
SKAL, iyo hombe indasitiri yekufambisa musangano inogara ichitaura mukushanya kuti uite bhizinesi neshamwari. Tourism inotibatanidza, kwete kupatsanura. Vanhu vemuAfrica vanozviziva izvi.
Africa iri kubatana mukuda kuti vashanyi vagare pamba, saka vashanyi vanobva pasirese pasirese vanogona kugamuchirwa kudzoka kukondinendi yavo yakanaka. Africa haigone kumirira kugamuchira vashanyi vachidzoka nemaoko maviri.
Kuti zvibudirire izvi, Africa yakagamuchira kurudziro ne UNWTO vachiti: "Nekugara kumba nhasi, tinogona kufamba mangwana."
zimbabwe achangoburitsa vhidhiyo yekuenda inonzi "On a lighter note," nyika uye kondinendi yese inogona kudada nayo. Zimbabwe zvakare haigone kumirira kugamuchira vashanyi kunzvimbo yavo yezvishamiso.
Mutambi wedumbu muSouth Africa anoita online, mugadziri wefashoni muLibya akachinja zvigadzirwa kuti Africa irambe iine hutano, uye African Tourism Board yakaisa timu yepasi rose yekurota pamwe inoshanda zvinesimba kumashure kwechiitiko kuponesa iyo kondinendi inogadzira mari yekufambisa neyekushanya indasitiri.
Amai Africa vane magamba akawandisa kuti vanyorwe uye kudomwa mazita.
Africa iri kubuda sekondinendi iri kusangana nehutachiona hunouraya nehumhare kubva kumaodzanyemba kusvika kuchamhembe uye kubva kumabvazuva kuenda kumadokero kwekondinendi. Pakati peaya magamba pane nhengo zhinji dzeindasitiri yekufamba uye yekushanya.
Pasi pehutungamiriri hwe African Tourism Bhodhi uye aimbova Secretary-General weUNWTO Dr. Taleb Rifai naAlain St. Ange, vaimbova gurukota rezvekushanya Seychelles, boka rebasa rakagadzwa kuti rimire kumashure kweindasitiri yekufamba neyekushanya. Iko hakuna kushaikwa kwekufarira nenyika nenyika dzavanobatirana nadzo mukondinendi yose vachironga kuchengetedza imwe yevanonyanya kuwana mari kuAfrica - iyo Yekufamba neKushanya Indasitiri.
Rifai akanyorera timu yekurota yeAfrican Task Force yake. Ivo vanosanganisira Gloria Guevara, CEO we WTTC, iyo World Travel uye Tourism Council; iye Hon. Edmund Bartlett, Gurukota rezvekushanya kuJamaica uye mukuru we Global Tourism Resilience uye Crisis Management Center; Louis D'Amore, muvambi we International Institute for Runyararo Kuburikidza neKushanya; Muzvinafundo Geoffrey Lipman, Mutungamiri Ye ICTP uye SunX; aimbova gurukota rezveKushanya kuIjipita Hisham Zazou; iye Hon. Secretary of Tourism kuKenya Najib Balala; Dho Mudiki-shim mukuru we STEP muSouth Korea; naLinda L. Nxumalo, Eswatini Tourism Authority; pakati pevamwe vatungamiriri vanokosha vekushanya kubva muAfrica yese. Ivo vanotsigirwa neAfrican Tourism Board Mamiriri nenhengo dzeBhodi kubva kunopfuura nyika makumi mana. Kubvumirana zvibvumirano zviri mupombi pamwe nemasangano mazhinji emunyika uye ematunhu mumasangano eruzhinji neakazvimirira.
African Tourism inoda rutsigiro rwepasirese, uye iri rinogona kunge riri bhizimusi hombe.
Africa inoramba iri imwe yenzvimbo dzakanakisa pasi rese yekudyara munguva dzekutambudzika. Iyo African Tourism Bhodhi yakagadzirira kufambisa sumo kuti hurukuro ienderere mberi.
Iyo African Tourism Board yakavambwa mu2018 naJuergen Steinmetz, Muparidzi we eTurboNews uyo anoramba ari iye wekutanga Sachigaro uye aripo CMCO weATB. Mukati megore rimwe, iyo African Tourism Bhodhi yakakura ikava pan African NGO pasi pehutungamiriri hwaSachigaro wavo Cuthbert Ncube, CEO Doris Woerfel, COO Simba Mandinyenya, uye Mutungamiri Alain St. Ange.
Samaki Mkuu, the artist formerly known as the Kenyan swimming ace Jason Dunford, has akashanda pamwe Jus weJabali Afrika kuburitsa rwiyo rweCOVID-19 kubatsira kubatsira kuparadzira "meseji yekushamwaridzana nevanhu kuponesa hupenyu uyezve kuratidza kutenda kwedu kuvanachiremba vepasirese vari kurwira kumberi".
Kunze kweiyo African Tourism Board inokwira indasitiri hombe pasi rose, kune mamwe akawanda matanho makuru. Iyo yekuLibya fashoni chitaridzi zvachinja kubva kugadzira chic zvipfeko kune zvekurapa zvipfeko.
Iwo makwesha shanduko kubva pane zvakajairwa zvipfeko zvakagadzirwa nevasoni
Vakadzi vatanhatu vari kusona makwesha evanachiremba navanamukoti pafekitori yezvipfeko yeFashion House muguta guru reLibya, Tripoli.
Vese vakazvipira kuita basa, uye vamwe vari kutorara mufekitori.
Vakagadzira zvipfeko makumi mashanu zvekurapa kusvika parizvino uye vava kushanda pabatch yechipiri.
Mumwe muridzi wemba kuKenya akaudza maroja ake makumi matatu nemana kuti havafanirwe kubhadhara rendi yavo munaKurume naApril nekuti anonzwisisa kuti chirwere checoronavirus chakavaisa panguva yakaoma yemari.
Michael Munene ane dzimba 28 mudunhu rekumadokero kweNyandarua kwaanobhadharisa zviuru zvitatu zvemadhora eKenya ($ 3,000; £ 30) pamwedzi.
Iye zvakare ane zvikamu zvitanhatu zvebhizimusi zvakahayirwa zviuru zvishanu zvemadhora eKenya pamwedzi. Kana pasina mumwe wevaridzi vake abhadhara, acharasikirwa anodarika madhora zviuru zviviri.
Mutambi weBelly anoitira vanhu online
Vanhu vanotumira Nermine Sfar mameseji iye achiri kuita
Mutambi wemudumbu weTunisia Nermine Sfar anga achiratidzira mafambiro ake kuitira kuti vanhu vagare pamba panguva yekuvhara nyika yekuNorth Africa.
Akave achirarama-achitamba dhanzi kubva kumba kwake manheru ega ega uye mamirioni avanhu akatarisa mavhidhiyo ake paFacebook muvhiki rapfuura.
Yakatanga kukiya kusati kwatanga - yaive Svondo, Kurume 29, kune veTunisia - kunyangwe vanhu panguva iyoyo vanga vachitokurudzirwa kugara pamba.
Akatumidza mushandirapamwe wake pasocial media: "Gara pamba ndikutambire."
Zvinoratidzika kunge zvakashanda - kazhinji mazana ezviuru kurira manheru ega ega, uye vhidhiyo kubva svondo rapfuura rave kutariswa kanenge mamirioni maviri nguva.
Popstar inopa imba seyakavharirwa nzvimbo
Hamelmal Abate akasimuka kuita mukurumbira muma1990
Nyeredzi yekuEthiopiya pop akapa imba kuti ishandiswe nevanhu vanofanirwa kuenda kunogara kwavo vega.
Mwedzi wapera, hurumende yeEthiopia yakaraira kuti munhu wese anosvika munyika iyi aiswe oga muhotera nemari yake kwemazuva gumi nemana.
Zimbabwe Tourism haigone kumirira kuti vashanyi vadzokere munyika yavo inoshamisa uye vagovane iri meseji nenyika yepasirose yevashanyi
Africa iri kuuya pamwechete munguva yedambudziko uye kutya kukuru.
Zvinowanzo taurwa kuti ma Africa kubuda nekubuda kwezuva ndiwo akanyanya kunaka pasirese. Zvichida imhaka yekuti Africa yakasiyanasiyana, iyo nzvimbo yakazadzwa nematombo emurenje, masango makobvu, savanna dzakakura dzakavhurika, nemapani akazara nemafuro emhuka, uye hapana chinhu chakadai sekuona zuva richidonhera pagungwa rinopisa. Chero chingave chikonzero, manheru paanosvika, kondinendi ino inoyevedza ichasiya imwe spellbound ine zuva rakadzikira, uye kana mambakwedza akadzokera kumashure haungade kudzvanya bhatani rekuzeya!
The African Tourism Bhodhi inoda Africa kuve imwe nzvimbo yekusarudza pasirese.